Tranombakoka espaniola malaza indrindra amin'ny Instagram - tsy maintsy ahita | Vaovao momba ny dia
Isaky ny dia ataontsika, ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy jerena dia ilay mahatonga antsika hankafy ny kanto. Indraindray isika dia tsy mahatsikaritra izany ary ny marina dia very fotoana fohy tsy misy fetra ho an'ny fiainantsika isika. Noho izany, ilaina ny fahalalana ny tsirairay amin'izy ireo tranombakoka espaniola malaza indrindra, ary tokony hikajiantsika amin'ny fitsangatsanganana amin'ny ho avy.
Raha vantany vao ao amin'izy ireo isika dia afaka maka ny sarin'ny fahasarotana ary mizara izany amin'ny mpanaraka antsika rehetra amin'ny alàlan'ny Instagram. Zavatra efa lasa mahazatra be! Indrindra indrindra raha ity sary ity dia arahin'ny 'tenifototra' tsy misy farany, ka amin'izany fomba izany dia mahatratra olona maro kokoa. Miaraka aminy sy noho ny vavahady manokana Holidu, dia azo atao ny mamantatra hoe iza no tranombakoka espaniola malaza indrindra. Manana ambiny ve ianao nefa tsy mitsidika?
1 Tranombakoka espaniola malaza indrindra ao amin'ny Instagram: Museum of Contemporary Art of Barcelona
2 Museum Prado any Madrid
3 Museum an'i Guggenheim any Bilbao
4 Museum Reina Sofía any Madrid
6 Tranombakoky an'i Dalí any Girona
7 Ivon-toeran'ny kanto ankehitriny ny Andalusia
9 'Artium', Basque Center-Museum an'ny kanto ankehitriny
10 Museum an'i Picasso any Barcelona
Tranombakoka espaniola malaza indrindra ao amin'ny Instagram: Museum of Contemporary Art of Barcelona
Izy io dia mametraka ny tenany ho tranombakoka malaza indrindra amin'ny alàlan'ny Instagram. Izany dia satria iray amin'ireo toerana voalaza indrindra, miaraka amin'ny totalin'ny 147 662 voalaza. Vola avo ho an'ny toerana manan-danja eto amin'ny firenentsika. Ao anatin'izany no ahitantsika ireo zavakanto izay an'ny antsasaky ny taonjato faha-XNUMX. Izy ireo dia asa mihoatra ny 5 manomboka amin'ny taona 000 ka hatramin'izao, izay ny fomba pop eropeana dia atambatra amin'ny fomba avant-garde izay nanjaka nandritra ny taona 60 ary koa ny taona 70. Raha te-hitsidika azy ianao dia afaka manao izany ao amin'ny manodidina an'i 'El Raval'. Fantatra amin'ny anarana hoe 'MACBA', nambara fa tranom-bakoka ho an'ny tombontsoam-pirenena izy. Araka ny vavahady Holidu, ny sary mahazatra indrindra amin'ny Instagram dia tsy nalaina tao anatin'ity tranombakoka ity intsony, fa tao amin'ny vala ivelany. Faritra lavorary ho an'ireo tia skate 'rehetra.
Museum Prado any Madrid
Fantatsika fa raha miresaka momba ny tranombakoka espaniola malaza indrindra isika dia tsy maintsy eto amin'ity lisitra ity ny Museum Museum. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra, tsy any Espana ihany, fa manerantany. Amin'ny ankapobeny, azo lazaina fa manana asa izy tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Eto isika dia hankafy ny sanganasan'i Goya ary koa Velázquez na El Greco, tsy manadino an'i Bosco, izay ny fanangonana azy dia iray amin'ireo feno indrindra. Raha tsy maintsy namintina tamin'ny fehezanteny iray ny maha-zava-dehibe an'ity tranombakoka ity dia ny fananana ny zava-dehibe indrindra amin'ny kolontsaintsika. Saingy miverina amin'ny Instagram, misy totalin'ny 116, miaraka amin'i 'Las Meninas' no asa malaza indrindra amin'ny tambajotra sosialy. Azonao atao ny mitsidika azy, amin'ny fomba milamina kokoa mandritra ny herinandro sy ny maraina.
Museum an'i Guggenheim any Bilbao
Raha efa manan-danja samirery izy io, ao amin'ny Instagram dia miakatra maherin'ny 100 ny voalaza ao. Ny Guggenheim Museum dia tranombakoka kanto ankehitriny. Nosokafana tamin'ny 1997 izy io ary nanasongadina ny hevitra vaovao indrindra momba ny trano iray tsy mitovy amin'ny nahazatra antsika. Ho fanampin'izany, manana asa avy any New York izy ary koa sombiny sasany mindrana amin'ny tranombakoka hafa. Mponina mihoatra ny iray tapitrisa isan-taona, dia azo jerena amin'izao fotoana izao ary ho an'ny maro, ny sarivongan'ny alika kely avy any ivelany no iray amin'ireo voatonona indrindra. Na dia nakatona aza ny Alatsinainy, ny andro sisa amin'ny maraina dia vitsy ny olona, ​​izay hahafahantsika maka sary tsaratsara kokoa.
Museum Reina Sofía any Madrid
Tamin'ny taona 1990 no nitokanana ny tranombakoka Reina Sofía. Ao anatin'izany no ahitantsika ny kanto taonjato faha-XNUMX sy ankehitriny. Any amin'ny faritra Atocha no misy azy ary ny asany malaza indrindra dia ny 'Guernica' avy amin'i Picasso. Fa ankoatr'izay, misy ihany koa ireo sanganasa goavambe an'i Joan Miró na Salvador Dalí, tsy manadino ny kanto surealisista an'i Magritte na Óscar Domínguez. Noho izay rehetra hitantsika tao dia nanjary iray amin'ireo tranombakoka be mpitsidika indrindra izy io. Tsy nandeha lavitra intsony, tamin'ny 2016 dia namaky ny firaketana an-tantara tamin'ny fitsidihana telo tapitrisa sy sasany mahery.
Ity tranombakoka ity dia nahitana anaran'ireo mpanakanto tsy teo amin'ny toeran-kafa. Saingy tsy izany ihany, fa afaka mahita fampiratiana samihafa sy hetsika koa ianao. Ny fanangonana voatahiry eto dia samy hafa be, manomboka amin'ny Renaissance italianina, amin'ny alàlan'i Rubens na Caravaggio, ka hatrany Baroque Holandey ao Rembrandt. Samy miangona ao amin'ity tranombakoka tsy maintsy jerena ity ny endrika Rococo sy ny zava-misy i Manet ary ny fahatsapana ny endriny. Na dia ho an'ny maro aza, ny iray amin'ireo sanganasa lehibe dia 'Vehivavy ao amin'ny trano fidiovana' nataon'i Roy Lichtenstein.
Tranombakoky an'i Dalí any Girona
Ny ankabeazany dia natokana ho an'ny asan'ny mpanao hosodoko Salvador Dalí. Ho hitanao eo amin'ny kianja io Gala Salvador Dalí, ao amin'ny Figueras. Mampiseho ny angona fa tamin'ny taona 2017, izy no tranombakoka espaniola fahatelo notsidihina. Na dia marina aza fa manana ny maha-izy azy ny sanganasa rehetra, ho an'ny mpiserasera marobe, ny iray amin'ireo sary aseho dia ny endrik'izy ireo. Ilay tilikambo voaravaka atody goavambe, nahasarika ny sain'ny maro ary maherin'ny 15 ny voalaza ao.
Ivon-toeran'ny kanto ankehitriny ny Andalusia
Araka ny tondroin'ny anarany, ny zavakanto amin'izao fotoana izao no ho mpiorina voalohany amin'ity toerana ity. Tao amin'ny Monasiteran'ny Santa María de las Cuevas no misy azy io. Ao anatin'izany no hankafizanao zavakanto maherin'ny 1997 3, na dia ho an'ny maro aza, ny trano ihany na Monasiteran'ny Cartuja, dia efa kanto daholo. Noho io antony io, ny sary matetika matetika dia avy amin'ity faritra ivelany ity, fa raha efa ao anatiny ianao dia aza adino ny ao anatiny satria io foana no ankasitrahana indrindra ary misy manodidina ny 15 koa ny voalaza ao.
Tamin'ny 2013 no fahefatra amin'ny tranombakoka espaniola be mpitsidika indrindra izy io. Noforonina tamin'ny taona 1986 mba hahafahan'ny zavakanto maoderina indrindra miandraikitra ny fanampiana ny famitana farany. Asa mihoatra ny 10 no miorina amin'izany Taonjato faha-XNUMX. Amin'ity fotoana ity dia azonao atao koa ny mahita taranja roa, atrikasa ary fampisehoana na konferansa. Ny iray amin'ireo fampirantiana malaza indrindra dia ny an'i Anette Messager.
'Artium', Basque Center-Museum an'ny kanto ankehitriny
Ao Álava, any Basque Country, dia mahita tranombakoka espaniola malaza indrindra izahay. Ao anatiny dia misy ny asa vita Basque sy Espaniola tamin'ny taonjato faha-2002 sy faha-XNUMX. Izy io koa dia manana fampirantiana vonjimaika ary mifamatotra hatrany amin'ireo lohahevitra tena ankehitriny. Notokanana tamin'ny XNUMX izy io ary anisan'ny sanganasany rehetra, ny sary sokitra nataon'i Miquel Navarro. Izy koa dia malaza amin'ny Instagram noho ny voalaza mihoatra ny 10.
Museum an'i Picasso any Barcelona
Misy asa maherin'ny 4 an'ny Picasso, manam-pahaizana be, izay hitantsika amin'ity toerana ity. Tsy amin'ny sary hosodoko ihany fa amin'ny sary sokitra, sary na sary sokitra. Azo lazaina fa io dia iray amin'ireo fanangonana feno indrindra misy. Nisokatra ho an'ny besinimaro tamin'ny 200 izy io ary angamba ny malaza indrindra amin'ny tambajotra dia 'Ny sarin'i Picasso' nataon'i Douglas Duncan. Raha manontany tena ianao momba ireo voalaza ao amin'ny Instagram dia tokony holazaina fa tokony ho tamin'ny 9 660. Notsidihinao ve izy rehetra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Ny tranombakoka espaniola malaza indrindra amin'ny Instagram